Isizungu esihambisana nalezi zithandani | Bezzia
Isizungu sihambisana nezithandani
UMaria Jose Roldan | 13/10/2021 22:19 | Ubudlelwano
Impela uzwile kaningi ngesisho esithi: "Kungcono ukuba wedwa kunokuzihlanganisa nabantu ababi". Ngeshwa, kunabantu abaningi abakhetha ukuba ebudlelwaneni obunobuthi, ukugwema ukuba bodwa empilweni. Isizungu esihamba phambili esidumile sivame kakhulu kunalokho abantu abaningi abangacabanga ekuqaleni.
Akukho okwenzekayo ngokungabi nomlingani ngoba kungcono kakhulu ukuba wedwa kunokuba ebudlelwaneni obungenampilo, ukuthi alinakusasa nokuthi nakanjani lizohluleka.
1 Ukungashadi kuyindlela yokuphila evumeleke ngokuphelele
2 Ukungabi nalutho okukhulu kwesizungu kuhambisane
3 Ukulimala ngokomzwelo kwesizungu esihambisanayo
Ukungashadi kuyindlela yokuphila evumeleke ngokuphelele
Njengoba kwenzeka lapho uba nomlingani, ukungashadi kuyindlela yokuphila esebenzayo kakhulu. Akukhuthazwa ukuba nobudlelwano nomunye umuntu lapho uthando lubonakala ngokungabikho kwalo futhi ubuthi busemini. Imibhangqwana eminingi yanamuhla iyahluleka ngoba alukho uthando lweqiniso ngabantu abathandanayo futhi ubudlelwano bakheka ngenxa yokuncika okukhulu ngokomzwelo kanye nesifiso sokungabi wedwa empilweni.
Ukungabi nalutho okukhulu kwesizungu kuhambisane
Isizungu esihambisana naso sibangela isikhala esikhulu kumuntu ohlushwa yiso. Ungaba nomlingani oseduze ngokubuka ngokomzimba kepha ezingeni lomzwelo ubuze buyinto ebaluleke impela. Kukhona uchungechunge lwezinto noma amaqiniso angakhombisa ukuthi umuntu ubhekana nesizungu esihambisana nabashadikazi:
Umbhangqwana awumlaleli, okubuhlungu impela ezingeni lomzwelo.
Kukhona ukungathandeki ngokuphelele ngezinhloso noma amaphupho ukwenziwa ngokubambisana ngabashadikazi.
Iqembu elilimele lihlale linecala lakho konke futhi Akukho ukuxhumana uma kukhulunywa ngokuxazulula izinkinga ezahlukahlukene ezivelayo phakathi kwezithandani.
Lezi zimpawu zikhomba ukuthi lo mbhangqwana akuyona into efiselekayo nokuthi isizungu esihambisana nalokhu okukhulunywe ngaso ngenhla sesihleli ngaphakathi kubo. Akufanelekile ukuhlupheka nje ngokuba nomlingani futhi kungcono kakhulu ukuba wedwa. Ukuba nobudlelwano kufanele kube yinto yababili futhi kufanele kube nokubandakanyeka okuphelele kwabo bobabili abantu.
Ukulimala ngokomzwelo kwesizungu esihambisanayo
Ubudlelwano obunobuthi abulungile kunoma ngubani futhi kungadala ukulimala okukhulu ngokomzwelo kumuntu ohluphekayo. Ukuba nomlingani nokuzizwa unesizungu kuyinto okungafanele ivunyelwe ngoba amanxeba angokomzwelo esimweni esinjalo abaluleke impela. Ngokunikezwe lokhu, kungcono kakhulu ukuqeda lobu budlelwano ngokushesha okukhulu bese uzama ukwakha impilo kabusha, kungaba wedwa noma nomunye umuntu owenza lo mbhangqwana uphile kahle.
Ngamafuphi, akudingekile ukuba nomlingani noma ube nomuntu ngeqiniso elilula lokubalekela isizungu. Kunezikhathi lapho naphezu kobudlelwano obuthile, lo muntu useyedwa. Lokhu yilokho okwaziwa njengesizungu esihambisanayo futhi kulobu budlelwano akukho lutho lothando noma uthando, okuthile okudingekayo ukuze umbhangqwana usebenze.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Isizungu sihambisana nezithandani
Liyini iphansi le-pelvic nokuthi lingaqiniswa kanjani
Thola iziphakamiso zasebusika ekwindla ze-Thinking Mu